AMISOM oo ka xumaatay hadal kasoo yeeray askari ka tirsanaa ciidamada Burundi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa ka xumaaday hadal uu sii daayey askari ka tirsanaa ciidamada Burundi ee qeybta ka ah AMISOM, kaasoo ku laabtay magaalada Bujumbura ee caasimadda dalkiisa.
Askarigaan oo aan magaciisa la xusin ayaa wareysi uu siiyey wargeyska The Star ee kazoo baxa Kenya u sheegay in AMISOM aysan Soomaaliya u joogin in la jebiyo Alshabaab ee danta ugu muhiimsan tahay in la helo dhaqaale xoog leh.
Afhayeenka AMISOM Col. Cali Aadan Xumad ayaa ka jawaabay warka kazoo yeeray askariga reer Bururndi, wuxuuna waxba kama jiraan ku tilmaamay warkaas uu siiyey wargeyska The Star.
“Hadalka kasoo yeeray ninkaas sheegtay inuu ka tirsanaa ciidamada AMISOM aad ayaan uga xummaanay, qorshaheenuna waa inaan nabadeyno Somalia” ayuu yiri afhayeenka AMISOM oo la hadlay VOA.
Col. Xumud ayaa shaki geliyey in ninka warkaas bixiyey uu ka tirsanaa jiray ciidamada AMISOM, wuxuuna yiri “Sida uu hadalka u yiri askarigaasi waa mid aan jirin, aniguna maba filayo inuu Askarta AMISOM ka mid ahaa, waxaan filayaa inuu yahay ruux iska sheeganaya,”.
Wuxuu adkeeyey Afhayeenka AMISOM in ciidamada Midowga Afrika Soomaaliya u joogaan sidii dalka loo nabadeyn lahaa “Howlgalka AMISOM wuxuu ku dhisan yahay in dalka la nabadeeyo, waana middaas tan aan halkan u joogno” ayuu yiri Col. Xumud.
Askariga reer Burundi ayaa sheegay inuu mushaar ahaan uu u qaato $1200 oo doollar, isla markaana uu helo $500 oo doollar oo dheeraad ah, taasoo ay qaataan 10-askari oo ka kala tirsan ciidamada Somalia iyo Burundi oo qaata $50 ilaa $160 doollar.
Sida ay qortay Jariidada The Star ee Kenyanka ah, askarigaan ayaa u sheegay in danta koowaad ee loo joogo Soomaaliya tahay lacagtaan aan yareyn ee mushaar ahaanta loo qaato, ee aan ahmiyad koowaad la siinin in Alshabaab meesha laga saaro.